Engaging Content Marketing အခမဲ့ လေ့လာကြမယ် - Amazing Yangon
Home /Event, Featured/Engaging Content Marketing အခမဲ့ လေ့လာကြမယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒုတိယခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ #မျှဝေပါ Program လေးကနေ Content Marketing ကို စနစ်တကျ လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်။ #မျှဝေပါ ဆိုတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့လည်း မိတ်ဆွေတို့ကို လေ့လာထားတဲ့ နယ်ပယ်က ပညာရပ်တွေ အတွေ့အကြုံတွေကို မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ မိတ်ဆွေတို့လည်း ကျွန်တော်တို့ Program လေးမှာ ပါဝင်မယ့် လိုအပ်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက် ပြန်လည် 🍁မျှဝေရင်း 💁‍♂Content Marketing ကို အခမဲ့ လေ့လာသွားရမှာပါ။
ကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ Digital Marketing ပိုင်းကို 👨‍🏫အခမဲ့ မျှဝေပေးသွားမယ်… သင်တန်းတက်ဖို့အတွက် သင်တန်းကြေး လုံးဝ ပေးစရာမလိုပါဘူး… 📒စာရေးကိရိယာလေးတွေ ပြန်လည် မျှဝေလှူဒါန်းပေးသွားရုံပါပဲ။ ကျွန်တော်ကလည်း မိတ်ဆွေတို့ကို မျှဝေမယ် မိတ်ဆွေတို့ကလည်း ကလေးငယ်လေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေပေးပေ့ါ… သင်တန်းမှာလည်း ကျွန်တော် Online ကတက်နေတဲ့ သင်ခန်းစာတွေ Video တွေကိုလည်း အခမဲ့ ပေးသွားမှာပါ
ကြော်ငြာတွေ၊ Website တွေမှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ✍Content ဟာ ကိုယ်ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေ ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ အကြောင်းကို စားသုံးသူတွေသိအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့၊ စိတ်ဝင်စားမှု ရရှိစေဖို့ နဲ့ ဈေးကွက် ဝေစုကို ကောင်းကောင်းသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ဖို့အတွက် အရေးပါက Marketing တစ်ခုပါပဲ။ Content တစ်ခုစနစ်တကျ 💻ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် 1)Plan 2) Create 3)Design 4)Publish & Promote 5) Measure စတဲ့ တစ်ဆင့်ချင်းစီ ဖန်တီးသွားရပါတယ်။ Content Type တွေ ကိုလည်း ကိုယ်က ကျွမ်းကျင်စွာနားလည်ထားရပါမယ်။
💥Content ကောင်းတစ်ခုဟာ ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကို သိမ်းပိုက်နိုင်ပါတယ်💥
✅What is content marketing and why do i need it?
(Content Marketing ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာကြောင့် လိုအပ်တာလဲ)
✅Mapping to buyer persons and journeys
✅Type of content
✅The three r’s of content marketing စတဲ့ အကြောင်းအရာများအပြင် အခြားလေ့လာရမယ့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သင်ခန်းစာများကို မျှဝေသွားဖို့ ရှိပါတယ်။
သင်တန်းအတွက် 👨‍🎓👩‍🎓Digital Certificate ကိုလည်း ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(လူဦးရေ အကန့်အသတ်လေးရှိလို့ မြန်မြန်စာရင်းပေးထားစေလိုပါတယ်)🏆🏆🏆
သင်ကြားပေးမယ့် ဆရာတွေကလည်း လက်ရှိ Digital Marketing မှာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသူတွေဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး Brand များအား Branding လုပ်ပေးနေသူများဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဆန်းလင်းပိုင်း (Megan Alex)၊ ဦးလွင်မိုးအောင်၊ ဒေါ်ဆုလတ်နွယ် မှ မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး စာတွေ့ လက်တွေ့အပြင် လက်ရှိလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော Digital Branding ပိုင်းမှ ရရှိခဲ့သော အတွေ့အကြုံများကို ပြောကြားပေးသွားမှာပါ။
online မှ စာရင်းပေးရန် Link>>>
Form ဖြည့်ပြီးရင် #comment မှာ #Done လို့ ရေးပေးပါ
နံနက် (9:00) မှ ညနေ (5:00) အထိ
အမှတ် ၁၂၀၅၊ ၁၂လွှာ၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်၊ အိုလံပစ်တာဝါ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။
📱ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း – 09-970708450
💕💕💕အနာဂါတ်ကလေးငယ်လေးတွေပညာရေးလှပစေဖို့ဝိုင်းဝန်းမျှဝေ ကြပါစို့💕💕💕
💐မျှဝေပါရဲ့ ဒုတိယ Program လေးပဲဖြစ်ပါတယ်….
#Content_Marketing #Digital_Marketing #Sharing_is_Caring#Digital_Dream_Success #Megan_Alex #yes_we_can